Sergio Busquets Childhood Nyaya Yekuwedzera Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi Sergio Busquets Childhood Nyaya Yekuwedzera Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita; "El Pulpo". Our Sergio Busquets Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezveTsika yake yeChechi ku FC Barcelona. Zvisinei, vashomanana chete vanoona Sergio Busquet's Bio iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Sergio Busquets Childhood Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga uye Hwemhuri
Sergio Busquets Burgos akazvarwa musi we 16th raJuly 1988 kuna amai vake, Loli Burgos uye baba, Carles Busquets, vose vari mufananidzo uri pasi apa muSergio Busquets Family Photo.
Sergio akaberekerwa muchizvarwa chechipiri chikwata chemabhadharo emhuri. Akakurira muguta reBascell Sabadell paanenge achitamba nebhokisi nehanzvadzi yake Aitor Busquets (akafananidzirwa naye pasi) panguva yehuduku hwavo.
Baba vake, Carles, aivewo mutambi wenhabvu, uyo aimbova muchengeti weBarcelona akagara pachikwata kwemakore anoverengeka munguva ye1900s, kunyange zvazvo yakashandiswa sekuchengetedza. Sergio akafanirwa kuve mutambi wenhabvu nekuda kwebaba vake avo vaigara vachida mukomana wavo muduku kuti atevere makwara ake. Kufananidzirwa pasi, Kutsunga kwake kuva purogiramu yakafanana nababa vake kwakanga kusiri fantasy inopfuura.
Kuvimbika Kunovata mumhuri yeSergio: Baba vake, Carles Busquets akanga ari muchengeti wezvitsigiro akavimbika uyo akatsungirira kushandiswa sechipiri chekusarudza kwemakore panguva yake pa FC Barcelona. Mushure mekunge ichitaura kuti yakarasikirwa nemakwikwi ekutanga emakwikwi panzvimbo yekuchengetedza kwaBarca, Charles akafunga kuti mwanakomana wake, Sergio anotanga basa rake pachikwata chechidiki chechikoro chechidiki. Chinangwa chacho chaiva chekuita kuti Sergio awane zvishoma kupikisana uye akwire kumusoro.
Sergio Busquets Childhood Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts -Career Summary
Pazera remakore 7 chete mugore ra1995, Busquets akatanga rwendo rwake rwekukwikwidza nebhokisi reBadia. Mushure mekunge apedza imwe nguva ikoko, akatamira kuna CEF Barberà Andalucía mu1996 ndokugarapo kwemakore matatu. Sergio akabva adzoka kuchikoro che UE Lleida mu1999 nekuda kweavo chisarudzo chababa chinorwadza kusiya FC Barcelona.
Ndiani Akagumbura Sergio Busquets Baba: Sergio akasvika kuLleida football academy nokuda kwezvikonzero zvechikonzero chababa vake, Carles, uyo akagumbuka Louis van Gaal (waimbova FC Barcelona coach) uyo akamhanya kunze kwokutsungirira naye, achimumanikidza kuti abve Barça kuti asayire Lleida.
Zvakakosha kucherechedza kuti Jose Mourinho akafananidzirwa pasi) ndiye ndiye mudzidzisi weFc Barcelona apo Carles akabva.
Carles Busquets akaenderera mberi achienda pamwe nemhuri yake yose pakati pavo Sergio, uyo aifanira kusiya mukomana wake wekare wechidiki, Unió Esportiva Barberà kutamba muLleida kwaakagara makore matatu. Sergio Busquets akasimuka pamusoro pemapoka ose evechidiki, achiva mutambi wechidiki wechikwata muzera rake paaitungamirira boka rake kukunda chikwata chikuru.
Mushure mokunge baba vake vatiza kubva mubhola reLleida mu2002, Sergio Busquets akanzwa asinganzwisisiki pachikwata ichifunga kuti hapana chimwe chinhu chaanorwisana nacho, saka saka zvinodiwa kuenderera kune hukuru hwechidiki. Akaenda kuJàbac Terrassa kurutivi rwe2003 uye akapedza mamwe makore maviri kuchikoro asati aongororwa ne FC Barcelona football academy, La Masia. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Sergio Busquets Childhood Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pasi pemunhu wese mukuru, pane mukadzi mukuru, kana kuti shoko racho rinoenda. Uye mushure mechikamu chese chikwata che FC Barcelona Footballer, kune motokari inofadza kana musikana anoonekwa muzita raElena Galera Moron (inofananidzwa norudo rwehupenyu hwake pasi).
Senguva yekunyora, Sergio Busquets aripoly asina kuroorwa zvichida nekuda kwezvikonzero zvepachivande. Zvisinei, ave ari hukama hurefu nemumwe wake Elena Galera Moron waakasangana naye mu2013. Ukama hwavo hwakaramba huri kubudirira kubva pavakasangana. Apo vamwe vose veCc Barcelona avo vaifambidzana navo vari kuroorana, Sergio uyo ane mamionaire pa30 (nguva yekunyora) akaramba kuroorwa asi akafunga kubereka.
Pazuva 8th raMarch 2016, Sergio naAlena vakagamuchira mwana wavo wekutanga nemwanakomana wavakamutumidza kuti Enzo. Pasi pane zvishoma Enzo anotarisa zvakasimba kwazvo nevabereki vake.
Nguva inokosha zvikuru yemhuri yaSergio Busquets iri panguva kupembera mhemberero, nguva apo Elina naEnzo vanobatana naSergio pamwe chete neveboka reC FC Barcelona kuti vanyore nguva yacho.
Kubata zororo nembwa dzavo mushure mokupembera mutsara kana kuti kuguma kwemwaka kunowanzoonekwa kuna Sergio Busquets nemhuri yake.
Kutaura nezvembwanana, zvakakosha kutaura kuti murume nomudzimai vane zvikwata zviviri zviduku zvinonzi Minnie naLily vanofananidzirwa pasi apa.
Iwe unogona kuona nyore nyore imbwa yepamusoro inofanana zvikuru neyo yakaonekwa kubva pamufananidzo wekutanga weSergio Busquets nemhuri. Kunyanya, kufanana nembwa kunowanzoitirwa FC Barcelona. Pasi apa Lionel Messi kuzorora nembwa yake iyo yakawana kukura kunoshamisa kubva pakati paFebruary kusvika munaSeptember 2016.
Uyewo munaEpril 2018, vose Sergio naElina vakazivisa pamagariro evanhu kuti vaitarisira mwana wechipiri.
Sergio Busquets Childhood Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts -Tattoo Facts
Izvi zvinoratidza zvakawanda pamusoro pehupenyu hweSergio Busquets hwemhuri iyo inogona kuva nemafungiro echiArabhu nokuda kwechiratidzo chake cheArabic pachigaro chake chekuruboshwe. Sergio Busquets Arabic tattoo translates to;
"Chinhu kwauri, upenyu huri munyika yangu",
Anotsvenira tattoo kuna baba vake vamai vake avo vaviri vakanga vari pedyo zvikuru vasati vafa.
Sergio Busquets Childhood Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts -Lanky Facts
Tichitarisa zvakanyatsonaka mumufananidzo uri pasi apa, Sergio's appearing lanky rinoreva maonero eArabia. Dzimwe nguva, vanhu vaigara vachizvibvunza kuti Sergio Busquets anowana simba rake kubva pakufungisisa mazamu ake.
Kubvisa bhora, Sergio Busquets 'lanky makumbo nemaoko nguva dzose anoisa kushandiswa kwayo. Izvi zvinoratidzika sekuti anokwanisa kuvhara pasi zvinonzwisisika nokukurumidzira uye nekusingaperi zvinosangana nevashamisi vanopikisa bhora, vachivaisa kumigumo yenguva dzose.
Vatambi vematambo vane nguva yakareba vanowana zvakaoma kuenzana kuti ruoko rwakakura rwaSergio runodzivirira sei uye runotarisana nechepakati.
Sergio Busquets Childhood Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts -Cover Trust
Sergio Busquets anonyatsosiyana-siyana pamutambo wemutambo. Anounza runyararo uye chivande chikuru chekudzivirira mukati maro.
Yaiva nekuda kwekukwanisa kwake kugovera chifukidziro chikuru mumamiriro ayo Carles Puyol akamupa jeresi yebhola panguva yekubata kwake basa.
Pasina mubvunzo, kukanganisa kwakaitwa naSergio Busquets kunosiya kudzivirira kwechikwata chake mumakumbo. Sergio anokwanisa kuverenga mutambo anoita kuti zvive nyore kwaari kuti aite zvinganokosha zvikuru. Nguva dzose zvakaoma kuwana akafanana neakafanana kushandiswa kweSpanish.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nokuverenga Sergio Busquets Childhood Indaba yedu pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Saul Niguez Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts